China ikpere ikpere ya na ụlọ ọrụ mkpọ ice na ndị nrụpụta | Huanyi
SOOOO maara ihe mgbu: Icheta ihu na azụ nke ikpere na mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe na ọgwụ ọkụ ma ọ bụ oyi, nkedo ikpere oyi na-ebelata ọzịza, mgbu na mbufụt n'ihi ike ọgwụgwụ ahụ ike, mmerụ ahụ ma ọ bụ ịwa ahụ. Nkwonkwo ikpere dị nro na-enyekwa ahụ efe dị mma maka nkedo na nsogbu, ACL, ogbu na nkwonkwo, mmerụ egwuregwu, ịwa ahụ na ndị ọzọ.
Ikpo ọkụ ma ọ bụ oyi ọgwụgwọ: Gụnyere mbughari gel ngwugwu maka ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ oyi. Ngwunye ọ bụla na-adaba n'ime akpa. Ngwunye gel ndị na-adịghị egbu egbu bụ ndị a pụrụ iji mee ihe ugboro ugboro, ndị na-anaghị ehi ụra na ndị na-anaghị akwụ ụgwọ.
SOOOO maara ihe mgbu:Icheta ihu na azụ nke ikpere na mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe na ọgwụ ọkụ ma ọ bụ oyi, nkedo ikpere oyi na-ebelata ọzịza, mgbu na mbufụt n'ihi ike ọgwụgwụ ahụ ike, mmerụ ahụ ma ọ bụ ịwa ahụ. Nkwonkwo ikpere dị nro na-enyekwa ahụ efe dị mma maka nkedo na nsogbu, ACL, ogbu na nkwonkwo, mmerụ egwuregwu, ịwa ahụ na ndị ọzọ.
Ikpo ọkụ ma ọ bụ oyi ọgwụgwọ:Gụnyere mbughari gel ngwugwu maka ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ oyi. Ngwunye ọ bụla na-adaba n'ime akpa. Ngwunye gel ndị na-adịghị egbu egbu bụ ndị a pụrụ iji mee ihe ugboro ugboro, ndị na-anaghị ehi ụra na ndị na-anaghị akwụ ụgwọ.
Afọ 1.10 Ahụmahụ nke OEM, ODM. Anyị nwere ike ịhazi ọdịdị, eriri, logo, ngwugwu wdg, nwere ike ịnye gị ndụmọdụ ndị ọkachamara wee mepee azịza kachasị mma maka ngwaahịa gị.
4.N'ihi ikpere ikpere ndị ahụ na ngwugwu ice, nkwonkwo ụkwụ, nkwojiaka, nwa ehi, ukwu, ụkwụ, ubu akụrụngwa, ụlọ ọrụ anyị nwere nha na ọdịdị dị iche iche maka ịhọrọ gị, nwere ike dabara ndị mmadụ ọzọ.
Nke gara aga: mkpọ na oyi gel oyi
Osote: Icemụaka ice mkpọ
Akpụkpọ ụkwụ Ice Kachasị Mma
Ihe mkpuchi Knee na-ekpo ọkụ
Akpa Akpa Maka ikpere
Akpụrụ akpụ maka ikpere
Ihe mkpuchi Ice maka ikpere
Ikpere Cold Cold
Ikpere Gel Pack
Ikpere Ice Pack
Kechie akpụkpọ ụkwụ na Ice Pack